एक पछि अर्को प्रहरी लफ,डा ! नगर प्रमुख र प्रहरी निरीक्षकको बि!बादपूर्ण भिडियो सार्वजनिक ,आखिर दोष कसको हो ? -
एक पछि अर्को प्रहरी लफ,डा ! नगर प्रमुख र प्रहरी निरीक्षकको बि!बादपूर्ण भिडियो सार्वजनिक ,आखिर दोष कसको हो ?
१५ जेठ,काठमाडौं- बिश्व माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको विषम परिस्थितिमा देशमा बिभिन्न प्रकारका घट!ना घटि,रहेका छन् । कोरोनाको माहामारी एकातिर फैलिरहेको छ भने अर्को तिर देशका जिम्मेवारी पदमा बसेका केहि व्यक्तिको चर्चा परिचर्चासंगै चौतर्फी आलोचनासहित भिडियोहरु भाईरल बनिरहेका छन् । केहिदिन अगाडी एउटा औषधि पसलमा गएर डिउटीमा खटिएका प्रहरीले सो औषधि पसलका कर्मचारीलाई कु!टपिट गरेको भिडियो सामाजिक संजालमा भाईरल भएको छ । त्यो संगै काठमाडौं गोठाटारमा पत्रकार र प्रहरी बीच भएको खैलाबैला यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भैरहेको छ ।
प्र’हरीको समुहसंग क्यामेरा लिएर पुगेका संचारकर्मीको पनि विवाद भएको भिडियोमा देखिएको छ । सुकुम्बासी माथि भएको प्र’हरी दमनको भिडियो संकलन गर्न पुगेकाहरुको क्यामेरा प्र’हरीले खोसेको भन्दै वि’वाद भएको हो ।सुरक्षाकर्मीको टोलीको नेतृत्व गर्दै पुगेका प्र’हरी नायव निरिक्षकले नै क्यामेरा तो’डफो’ड गरेको भन्दै प्र’हरीसंग वि’वाद भएको भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा कैलालीको लम्की चुवा नगरपालिका प्रमुख माहादेव बजगाई र इलाका प्रहरी मोतीपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक रेवन्त बोहोरा बीच बिबाद चर्केको छ । सो भिडियो यतिबेला सामाजिक संजालमा निकै नै भाईरल बनेको छ । समर्थन र बचाउ गर्नेको पनि उत्तिकै जमात छ । नगर प्रमुखले पनि प्रहरी माथि जाई लागेका छन् भिडियो देख्न सकिन्छ । प्रहरीलाई कालो मुसो समेत लगाउछु भनेका छन् । तर यो भिडियो प्रहरी जवानले आफै खिचेको देखिन्छ । नगर प्रमुख बजगाईले यदि गल्ति गरेको हो भने मुद्दा अगाडी बढाउनु पर्ने ठाउँमा प्रहरी स्वयमले सुन्न न सकिने भिडियो सामाजिक सन्जाल पोस्ट गरेका छन । चौतर्फी आलोचना आए पछि जनबोलि कार्यक्रममा रमेश बजगाईले तयार पारेको भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस :
Previous लुकेर सिनेमा हलमा सुटुक्क कोरोनाको खोप,स्थानीयवासीले चाल पाएर हल भित्र छिर्दा भागाभाग
Next इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित,फुटबल प्रशिक्षकले मागे माफी